Ciladda amniga ee CyanogenMod ROM | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | ROM, Amniga
Cyanogen waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee loo yaqaan warshadaha casriga ah ee ROMS. CyanogenMod iyo dhamaan habeynta ku saleysan ROM-kan ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee la soo dejiyey, inkasta oo ay u muuqato in haddii aad leedahay CyanogenMod ROM laga yaabo inaad dhibaato leedahay.
Waana in khabiir xagga amniga ah, oo aan rabin inuu magaciisa sheego, inuu helay cillad nabadgelyo oo khatar ah taas waxay saameyn ku yeelan doontaa dhammaan isticmaaleyaasha isticmaalaya CyanogendMod ROM iyo ROM-yada tirada badan ee ka dhasha.
CyanogenMod wuxuu leeyahay cilladaha amniga ee daran
Sababta ugu weyn ee khalkhal gelinta amniga waxay salka ku heysaa dayacaad uu sameeyay qaar ka mid ah barnaamijka Cyanogen. Mid ka mid ah cilladahan ayaa ku saleysan xaqiiqda ah in kooxda ka dambeysa CyanogenMod laga guuriyey nambarka gaboobay ee Oracle Java 1.5. Koodhkan, oo loo isticmaalay in lagu falanqeeyo shahaadooyinka laguna aqoonsado magacyada martida loo yahay, waxaa la soo dersa khaladaad badan wuxuuna si gaar ah ugu nugul yahay weerarada MiTM (Man in the Middle).
Un Weerarka MitM ama dhex dhexaad, Isbaanishka waa weerar kaas oo awooda lagu aqriyo, lagu qoro loona wax ka bedelo farriimaha u dhexeeya labada dhinac marka la doono la helo iyadoo midkoodna uusan ka warqabin wax isdaba marin. Qaabkan, weeraryahanku wuxuu dhexda u marin karaa farriimaha u dhexeeya labada dhibbane oo weliba, iyo waxyaabo kale, wuxuu ku kicin karaa diidmada weerarka adeegga. Marka la soo koobo, cillad ammaan oo aad u weyn.
Waxaan fiirinayay koodhka qaybta HTTP waxaanan ka fikirayay inaan horay u arkay lambarkan. Waxaan eegay GitHub oo waxaan ka helay tan [sic] ka mid ah koodhkii duugoobay ee ay isticmaalayeen, » khabiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in, «Haddii aad u sameysato shahaado SSL degmo aad adigu leedahay, tusaale ahaan xumaanta.com iyo qayb ka mid ah codsashada saxiixa shahaadada sida goobta oo kale» magaca ururka 'waxaad gelineysaa' qiimaha, cn = * magaca domain *, waxaa si otomaatig ah loo aqbali doonaa inuu yahay magac domain sax ah shahaada ».
Nasiib wanaag khabiirkan amniga horeyba la xiriirtay kooxda Cyanogen waxayna ku dadaalayaan sidii ay u hagaajin lahaayeen cilladaan culus ee amniga sida ugu dhaqsaha badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » ROM » CyanogenMod wuxuu leeyahay cillad nabadgelyo oo khatar ah